Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Kufuphi kwi-1 yezigidi zeeRobhothi ngoku kwiiFactory zaseTshayina
Ingxelo entsha yeeRobhothi zeHlabathi zeRobhothi zika-2021 ezithiwe thaca yiManyano yezeRobhothi yaMazwe ngaMazwe (IFR) ibonisa irekhodi yeerobhothi zemizi-mveliso ezingama-943,000 ezisebenza kwiifektri zaseTshayina namhlanje – ukwanda ngama-21%. Ukuthengiswa kweerobhothi ezintsha kukhule ngamandla malunga neeyunithi ze-168,000 ezithunyelwe ngo-2020. Oku kungaphezulu kwe-20% xa kuthelekiswa no-2019 kunye nexabiso eliphezulu elirekhodiweyo kwilizwe elinye.
“Uqoqosho lwaseMntla Melika, eAsia naseYurophu aluzange lube nenqanaba eliphantsi le-Covid-19 ngaxeshanye,” utshilo uMilton Guerry, uMongameli weInternational Federation of Robotics. "Ukuthathwa kwe-odolo kunye nemveliso kwishishini lemveliso yaseTshayina yaqala ukunyuka kwikota yesibini ka-2020. Uqoqosho lwaseMntla Melika luqale ukuchacha kwisiqingatha sesibini sika-2020, kwaye iYurophu yalandela emva nje kancinci."
Abavelisi berobhothi baseTshayina bajongana nemarike yasekhaya, apho babambe isabelo semarike se-27% ngo-2020 (iiyunithi ezingama-45,000). Esi sabelo sibe nokuguquguquka okuthile kule minyaka isi-8 idlulileyo. Ngo-2020, ukufakwa kweerobhothi zangaphandle - kubandakanywa neeyunithi eziveliswe e-China ngababoneleli abangengabo baseTshayina - bakhule kakhulu nge-24% ukuya kwiiyunithi ze-123,000 ngo-2020 kunye nesabelo semarike esipheleleyo se-73%.
Ufakelo lweerobhothi zehlabathi kulindeleke ukuba lubuyele ngamandla kwaye lukhule nge-13% ukuya kwiiyunithi ze-435,000 ngo-2021, ngaloo ndlela idlula inqanaba lerekhodi eliphunyeziweyo ngo-2018. Ufakelo eMntla Melika kulindeleke ukuba lunyuke nge-17% ukuya phantse kwiiyunithi ze-43,000. Ufakelo eYurophu kulindeleke ukuba lukhule nge-8% ukuya phantse kwiiyunithi ezingama-73,000. Ukufakwa kweerobhothi e-Asia kulindeleke ukuba kudlule amanqaku angama-300,000 kwaye kongeze i-15% kwiziphumo zonyaka ophelileyo.